Tsy te handre ny tantaranao ratsy aho. Martech Zone
Tsy te handre ny tantaranao aho
Talata, Aogositra 28, 2012 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Fotoana hikorontana. Ny buzzword vaovao manerana ny haino aman-jery sosialy sy ny habaka marketing ao anatiny dia fitantarana. Nizara infografika vitsivitsy izahay tamin'ny fitantarana mifanohitra amin'ny resaka orinasa ary tantara an-tsary… Ary mpankafy fitantarana aho. Amin'ny mpihaino marina dia tsy misy tsara noho ny tantara tsara hifandraisanao amin'ny mpihaino anao.
Fa mampiasa ny Tantara amin'ny zava-drehetra. Tsy maintsy milaza tantara ny logo. Ny marika dia mila mitantara tantara iray. Tsy maintsy mitantara tantara ny sary. Tsy maintsy mitantara tantara ny infografika. Mila mitantara tantara ny tranokalanao. Mila mitantara tantara ny bilaoginao. Mila milaza tantara ny tolo-kevitra. Ny famelabelarana dia mila mitantara tantara iray.
Ampy amin'izay ny tantara ratsy, efa! Satria ny mpampianatra sasany miresaka momba ny tantara any amin'ny toerana iray dia tsy midika hoe ny paikady mety ho an'ny tontolon'ny marketing sy ny mpihaino rehetra. Mampatsiahy ahy ny zava-nitranga tao amin'ny Life of Brian… ny Famantarana ny kiraro!
Tahaka ny kiraro tsy famantarana avy amin'i Brian, sady tsy mitantara ny valin'ny olanao amin'ny varotra rehetra no mitantara izany. Fantatro fa misy olona mivavaka amin'ireto mpampianatra marketing ireto… saingy raiso miaraka amin'ny voamadinika ny toro-hevitr'izy ireo. Tsy fantatr'izy ireo ny vokatrao, ny indostriao, ny vidinao, ny tombotsoanao sy ny maharatsy anao, ary mahatsikaiky - tsy fantatr'izy ireo ny tantaran'ny mpanjifanao.
Indraindray, tsy mila tantara aho - efa henoko ny tantara.
Indraindray, tsy mila tantara aho - te-hisoratra anarana amin'ny Internet fotsiny aho.
Indraindray, tsy mila tantara aho - tsy manam-potoana hihainoana aho.
Indraindray, tsy mila tantara aho - mila mahita ireo fiasa fotsiny aho.
Indraindray, tsy mila tantara aho - mila mahafantatra ny tombony fotsiny aho.
Indraindray, tsy mila tantara aho - fantatro ny mpanjifanao ary maniry vokatra mitovy amin'izany aho.
Indraindray, tsy mila tantara aho - mila mijery ilay demo fotsiny aho.
Indraindray, tsy mila tantara aho - mila fitsapana fotsiny aho.
Indraindray, tsy mila tantara aho - mila fantatro fotsiny hoe ohatrinona.
Indraindray, tsy mila tantara aho - mila mividy fotsiny aho.
fitantarana dia sarotra ary mitaky talenta tena izy handrafetana ny sary an-tsoratra, sary na horonan-tsary mba hiantohana ny fahatakarana. Ny fotoana, ny feony, ny tarehintsoratra… ny sombin-javatra rehetra dia mila apetraka mba hiasa tantara iray ary hanohina tokoa ireo mpihaino isan-karazany resahinao.
Volana vitsivitsy lasa izay dia nanao fikarohana momba ny vokatra iray aho izay toa nanamboatra ny olantsika niaraka tamin'ny mpanjifa iray. Fantatro hoe ohatrinona no aloan'ny mpanjifa. Fantatro hoe ohatrinona ny olana naterak'izy ireo. Fantatro fa vonona ny handoa vola aho mba hialana amin'ilay olana. Tsy nanana ny fampahalalana nilaina rehetra ny tranokala, raha tsy izany dia mety nisoratra anarana teo no ho eo aho… saingy tsy maintsy nisoratra anarana amin'ny demo aho.
Rehefa avy nisoratra anarana tamin'ny demo aho dia nahazo antso alohan'ny fanombohana izay nanontaniako fanontaniana maromaro. Taorian'ny fanontaniana litania dia nitaraina aho fa nangataka fotsiny ilay demo. Tsy maintsy vitaiko ny famaliana ireo fanontaniana. Vantany vao vita dia nandamina ilay demo aho. Andro iray na taty aoriana, niantso ny demo aho, ary nosokafan'ilay mpivarotra ny tokotaniny manokana namboarina ho ahy persona ary nanomboka nilaza ny Tantara.
Niangavy azy ireo aho mba hijanona. Nanohitra izy.
Nanontany aho raha hanao demo izahay, ary nihatakataka tamin'io fanontaniana io izy. Dia noteneniko izy mba hiantso ny mpitantana ahy dia nihantona aho. Kivy aho izao. Niantso ny mpitantana azy ary nangataka taminy aho mba hampiseho tsotra ilay rindrambaiko, manazava fa raha ao anatin'ny teti-bolako ny vidiny ary raha ilay rindrambaiko no nametraka ny olana dia vonona aho hividy.
Nasehony ahy ilay demo. Nolazainy tamiko ny vidiny. Nataoko ny fividianana.
Tamin'ny fiafaran'ny antso dia niaiky izy fa hiverina hiverina hanamboatra ny fizotry ny varotra mba hipetrahan'ny orinasa toa ahy.
Na dia tiako aza ny asa tsy mampino nataon'ny ekipany mba handinihana ny fizarana fandresena / fatiantoka, hampivelatra personas, hanoratra tantara ho an'ireny personas ireny, hametraka paikady prequalification ary hanome ahy tantara iray izay tena nahasarika fa hanao ilay fividianana… I tsy mila na mila an'io. Tsy nanam-potoana hanaovana tantara aho. Mila ny vahaolana fotsiny aho.
Aza mandray an'io amin'ny fomba diso, fa misy toerana eo amin'ny resaka marketing. SAINGY fitantarana Tsy ny fanafodin'ny paikady marketing. Ny sasany amin'ireo mpitsidika ny tranokalanao dia tsy mitady tantara… ary mety ho sosotra izy ireo ary novonoin'izy ireo. Omeo safidy hafa izy ireo.
Ary rehefa tapitra ny fihorakorahana, ity dia tantara tsara iray tianao hamaky… ny namako (sy ny mpanjifako), Muhammad Yasin sy Ryan Brock jereo ny tantaram-piainan'ny olona izay nilaza ny marina tamin'ny fotoana mety. Vakio miaraka rehefa mijery ny tontolon'ny haino aman-jery sosialy amin'ny vanim-potoana dizitaly izy ireo ary mijery ny lasa hahalala fa rehefa miresaka ny kanto fitantarana dia misy tsy misy vaovao ambanin'ny masoandro.
Raiso ny kopian'ny Tsy misy zava-baovao: tantara tsy misy fanajana ny fitantarana tantara sy media sosialy.
Jereo ireo mpitsidika mijery, mijery, mividy amin'ny fotoana tena izy!
Ahoana ny fomba hahatongavana ho mpamorona fampiharana finday
Aug 28, 2012 amin'ny 11: 34 AM
Chapeau lehibe lehibe.
Ary koa mba hampihomehy ahy ny lohako amin'izany.
Aug 29, 2012 amin'ny 11: 42 AM
Misaotra @ twitter-16882886: disqus!
Aug 29, 2012 amin'ny 3: 18 AM
Douglas, ny fomba tsara indrindra mamaritra ny fankasitrahako an'ity lahatsoratra ity dia tantara kely iray. Indray mandeha aho dia niasa tao amin'ny Twitter ary nahita ity lohateny hafahafa ity, “Tsy te handre ny tantaranao aho. Novakiako ilay lahatsoratra ary nihomehy aho. Ary niaina tamim-pifaliana mandrakizay aho.
Aug 29, 2012 amin'ny 11: 41 AM
@AstroGremlin: disqus mankasitraka indrindra! 🙂
Aug 29, 2012 amin'ny 4: 51 AM
Tsara ny tantara, saingy ao anatin'ny tontolon'ny soundbites sy endri-tsoratra 140 ihany koa isika. Safidy multi-làlana no ilaina. Ny lahatsoratro bilaogy vao haingana nahazo aingam-panahy avy amin'ny sariitatra Rupert Bear, miaraka amin'ny sary, tononkalo ary prosa, dia niasa tsara tamin'ny zanako. Ny pejy fipetrahana maharitra, ohatra, dia tsara ho an'ny SEO sy ny mpamaky sasany, fa ny horonantsary sy ny bokotra 'mividy-izao / dingana manaraka' aloha dia manome làlana fitetezana hafa.
Aug 29, 2012 amin'ny 11: 43 AM
@markstonham: disqus Mbola tiako ny manao kopia maharitra… fa araka ny filazanao dia ilaina ny safidy. Misaotra!
Ny masoivoho Hoffman
Sep 1, 2012 ao amin'ny 5: PM PM
Mahagaga fa toa manana ny fivavahan'ny mpitantara ny rehetra.
Raha tokony hitantara tantara ianao dia misy zavatra holazaina amin'ny fampiharana ny teknikan'ny fitantarana amin'ny fifandraisana amin'ny orinasa.
Raha apetrakao amin'ny fotony ity dia ny fampiasana fiteny mba hisarihana ny sain'ny olona iray na ny fitiavany tsara kokoa. Mazava ho azy fa ny fifandraisana izay latsaka ao amin'ny quadrant manjavozavo dia mamokatra fihetsika amin'ny faran'ny spektrum.
Azoko atao ny miady hevitra fa ny lohateninao dia mampiasa ny teknikan'ny fitantarana ny fanaovana toerana mifanohitra.
Tsara ny zavatra.